Ajụjụ - Tianjin Poofey sooks mwekota Co., Ltd.
Clamps na emefu
Gwara clamps With Rubber
Nrụgide oru eji jikọta
High Ike-eji jikọta
worm drive clamps-na ịgbado ọkụ
worm drive clamps-enweghị ịgbado ọkụ
Anyị ahịa bụ isiokwu ịgbanwe dabere na ọkọnọ na ndị ọzọ ahịa ihe. Anyị ga-ezitere gị na-emelite price list mgbe gị na ụlọ ọrụ na kọntaktị anyị maka ndị ọzọ.
Ị nwere a kacha nta iji ibu?
Ee, anyị na-achọ mba nile iwu ka nwere na-aga n'ihu kacha nta iji ibu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka resell ma na dị nta quantities, anyị nwere ike ikwu na ị na-elele anyị website
Nwere ike ị na-enye mkpa akwụkwọ?
Ee, anyị nwere ike inye ọtụtụ akwụkwọ tinyere Asambodo nke Analysis / Conformance; Insurance; Mmalite, na ndị ọzọ na mbupụ akwụkwọ ebe chọrọ.
Gịnị bụ nkezi ụzọ oge?
N'ihi na n'omume, na-edu ndú oge bụ banyere 7 ụbọchị. N'ihi na uka mmepụta, na-edu ndú oge bụ 20-30 ụbọchị mgbe na-anata ego ugwo. The ụzọ ụfọdụ, irè mgbe (1) anyị natara gị ego, na (2) anyị nwere ikpeazụ unu ihu ọma gị ngwaahịa. Ọ bụrụ na anyị ụzọ ụfọdụ na-adịghị arụ ọrụ na gị n'obi imecha, biko gaa n'elu gị chọrọ na gị ire ere. N'ọnọdụ nile anyị ga-agbalị nabata gị mkpa. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Olee ụdị ịkwụ ụgwọ ụzọ i na-anabata?
Ị nwere ike ime ka ugwo ka anyị akụ, Western Union ma ọ bụ PayPal:
30% ego tupu, 70% itule megide ndeputa B / L.
Anyị akwụkwọ ikike anyị ihe na rụọ ya. Anyị nkwa bụ gị afọ ojuju na anyị na. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ, na ọ bụ omenala nke anyị ụlọ ọrụ na adreesị na-edozi ihe niile ahịa mbipụta ka onye ọ bụla nwere obi ụtọ
Ị na-ekwe nkwa enem nnyefe nke ngwaahịa?
Ee, anyị na-eji elu àgwà mbupụ nkwakọ. Anyị na-ejikwa pụrụ iche odachi mbukota maka ize ndụ ngwaahịa na irè oyi nchekwa shippers maka okpomọkụ mwute ihe. Specialist nkwakọ ngwaahịa na-abụghị ọkọlọtọ mbukota chọrọ pụrụ ịma ihe ọzọ ụgwọ.
Olee banyere mbupu ụgwọ?
The mbupu na-eri na-adabere na ụzọ ị na-ahọrọ na-ngwongwo. Express bụ ejikari kasị quickest kamakwa kasị oké ọnụ ụzọ. Site seafreight bụ ihe ngwọta kasị mma n'ihi na nnukwu ichekwa. Kpọmkwem ibu udu anyị nwere ike na-enye gị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ.
Chọrọ na-arụ ọrụ US?
Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Iron sooks mwekota, Igba USB mwekota, Parallel Clamp, Metal Spring mwekota , Kwụ Toggle mwekota, Steel Pipe Mmezi njikọ,